PressReader - Ilanga: 2017-10-30 - Sekuyisikhathi sokuvuna abakutshalile
Sekuyisikhathi sokuvuna abakutshalile
MHLELI: Njengoba sezibuya namajoka kubafundi bebanga le-12 abebesebenza ngokuzikhandla kusukela kuqala unyaka, sekuyisikhathi-ke sokuba bavune abakutshalile.
Ngikusho ngeqholo ukuthi sekuyisikhathi sokuba bavune abakutshalile ngoba kangingabazi ukuthi othisha bethu iningi labo elisebenza ngokuzikhandla, libacijisise kahle laba bafundi kusukela kuqala unyaka. Kusukela kuqale ukubhalwa kwezivivinyo zikaGrade 12, sengike ngahambela izikole ezimbalwa ezifundeni ezimbili uMgungundlovu neLembe.
Ngingasho ukuthi kulezi zikole - bengibheka ukuthi ngabe konke kuhamba kahle yini - isimo siyethembisa. Empeleni ngihlabeke umxhwele ngendlela abafundi abebekulungele ngayo ukubhala izivivinyo zabo. Yize ngonyaka owedlule izinga lokuphasa kwabo lenyukile kancane lisuka ema-60,7 % ngowezi-2015 laya ema-66,8 % ngowezi-2016, kasifunanga ukuzithela ngabandayo.
Siqhubekile nokusebenza ngokukhulu ukuzikhandla sicija abafundi ukuba bakwazi ukuhlangabezana nezinga lokuphasa esizibekele lona kulo nyaka. Kulo nyaka sizimisele ukuthi izinga lokuphasa likhule ngamaphesenti ayisithupha kuya phezulu.
Sizibekele ukuba siphase ngama76% kuya phezulu kulesi sifundazwe. Lokhu kubaluleke kakhulu kithi ngoba vele siyisifundazwe esikhulu nesinezinombolo zabafundi bakaGrade 12 ezidlula zonke ezinye izifundazwe. Bheka nje ngoba isifunda esisodwa KwaZulu-Natal, uMlaza, sinabafundi abangaphezu kwabaseNorth West nabaseNothern Cape behlanganisiwe. Sona futhi lesi sifunda saseMlaza sisodwa sinabafundi abalingana nabaseFree State.
Lokhu kusho ukuthi uma kuke kwabheda esifundazweni sethu kulimala izwe lonke futhi uma isifundazwe sethu senza kahle, umsebenzi wethu ufukula izwe lonke. Singasho nje ngamafuphi ukuthi siwumgogodla wezwe lonke kwezemfundo. Lokhu-ke kungenye yezinto ezihlala zisikhumbuza ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba sisebenze ngokuzikhandla ukuze siphakamise izwe lethu.
Siyazi futhi ukuthi amehlo ahlala njalo ethe njo lapha esifundazweni sethu esihle kakhulu sikaPhunga noMageba ngoba yisona esiphethe injabulo kazwelonke. Yizona-ke lezi zizathu, phakathi kweziningi, ezidala ukuba sizikhandle kakhulu, nisibone siwela imifula nezihosha senyuka amagquma sintweza emathafeni ngoba sisuke sazi ukuthi umsebenzi esinawo kakuwona nje owokufukula isifunda- zwe sethu kuphela kwezemfundo.
Ungowokwenyusa izinga lemfundo eNingizimu Afrika yonkana. Kasingabazi-ke ukuthi abafundi bethu bazokwenza lokhu okufanele bakwenze, okuhambisana nomsebenzi omkhulu esiwenzile ukubacija kusukela kuqala unyaka. Kungalesi sizathu ngihlaba ikhwelo kubona bonke ababhalayo ukuthi amaphaphu phansi bese benza esibafundise khona.
Ithimba lothisha bethu elisebenza ngokukhulu ukuzikhandla, ngifisa ukulichoma uphaphe lwegwalagwala ngomsebenzi omuhle eliwenzile kulo nyaka. Ngizophinda ngibabonge kahle othisha bethu uma sekuphume imiphumela. Bayazi-ke nabo ukuthi uma benze kahle siyababonga, hhayi nje kuphela ngomlomo kodwa sibanika ngisho nemiklomelo. Yingakho nje ngesonto eledlule besinomcimbi obizwa ngeNational Teachers’ Awards, obuwubukhazikhazi wokuklomelisa othisha obuse-Olive Convention Centre, eThekwini.
Ngifisa ukugqugquzela abazali ukuba bafake umfutho wokugcina ngoba izinjomane sezehla ngomaliyethe, zibheke entanjeni. Mabeseke izingane ngakho konke abangazeseka ngakho ngoba lesi cishe yisikhathi esibaluleke ukwedlula zonke empilweni yazo. Ngifisela bonke abafundi bakaGrade 12 inhlanhla ezivivinyweni zabo. Nabafundi bamabanga ahlukene angaphansi kukaGrade 12 kasibashiyi ngaphandle, nabo sibafisela okuhle kodwa. UMhlonishwa uMthandeni Khethomthandayo Dlungwane ungungqongqoshe wezeMfundo kwaZulu-Natal
UNGQONGQOSHE wezeMfundo KwaZuluNatal, uMnu Mthandeni Dlungwane ufisela abafundi ukubhala kahle izivivinyo zokuphela konyaka wezi-2017.